Cashier | Hsu Latt Kaung Co.,Ltd ﻿
24.7.2020, Full time , Trading
Company: Hsu Latt Kaung Co.,Ltd
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd.
•	နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းများကို BOD ထံ အစီရင်ခံတင်ပြပေးရမည်။
•	ဈေးနှုန်းများကို မှန်ကန်အောင်တွက်ပေးရမည်။
•	နေ့စဉ်ငွေလက်ခံ ၊ ငွေအမ်းပေးခြင်းများကို တိကျမှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
•	အရောင်းဗောင်ချာများကို တိကျမှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ရည်။
•	ဘွဲ့ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စရှင်းလင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
•	Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
Work location 14, Shwe Bo St.,Kyauk Myaung (Upper) Ward,Yangon.
•	နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းများကို BOD ထံ အစီရင်ခံတင်ပြပေးရမည်။ •	ဈေးနှုန်းများကို မှန်ကန်အောင်တွက်ပေးရမည်။ •	နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်များကိုတွက်ချက်ပေးရမည်။ •	နေ့စဉ်ငွေလက်ခံ ၊ ငွေအမ်းပေးခြင်းများကို တိကျမှန်� ...
•	နစေ့ဉ်အရောင်းစာရင်းများကိုရေးသားတင်ပြပေးရမည် •	ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကြွေးကောက်ပေးရမည် •	ပေးအပ်လာသောတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည် •	စာရင်းဇယားများကိုတိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည်
•	လစဉ်ချမှတ်ပေးထားသောအရောင်းများပြည့်မှီအောင်လုပ်ဆောင်ရမည် •	ဟိုတယ်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များသို့ဝင်ရောက်သွားလာပြီး ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးရမည် •	ဈေးကွက်ကိုလေ့လာသုံးသပါ၍ရောင်း� ...
•	Digital, Online Marketing ( Social media) မြားအသုံးပွုပွီး Content မြားရေးသားပွီး ကွျောငွာမြား ဖနျတီးရေးရနျ။ •	Market Assessment နဲ့ Data Analysis ပွုလုပျရနျ။ •	Digital Marketing Strategy များရေးသားခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း •	Customer Relationship Management ကောငျးမှနျစှာ ပွုလုပျရန ...
Cashier Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Hsu Latt Kaung Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon